हाम्रो समुदाय को धेरै आमाहरू मनाउँदै
यो मातृ दिवस, हामी सबै “MAF Moms” को उत्सव मनाउँदै छौं Lending Circles मार्फत आफ्ना परिवारको लागि अझ राम्रो जीवन दिन।
यो आइतवार हाम्रो जीवनमा बलियो, बुद्धिमान, उदार, र मायालु आमालाई समर्पित दिन हो। मातृ दिवसको भावनामा, हामी केही MAF ग्राहकहरू मनाइरहेका छौं जसले आफ्नो परिवारका लागि उज्ज्वल वित्तीय भविष्य निर्माण गर्न कडा मेहनत गरिरहेका छन्।
शेफको तीन जेनेरेसन
को लागी ग्वाडालुपे, प्रामाणिक मेक्सिकन खाना पकाउन सधैं पारिवारिक मामिला भएको छ। एक केटीको रूपमा, उनी र उनकी आमाले सुरुदेखि नै रमाईलो टर्टलहरू बनाए, र अब उनी र उनका छोरीहरूले पनि त्यसो गरे। उनले आफ्नो Lending Circles loanण उपकरण किन्न प्रयोग गरे र उनको खानपान व्यवसाय विस्तार गर्न भ्यानका लागि भुक्तान गर्न मद्दत गरे, एल पिपिला - जुन उनी छोरीको साथ उनीहरुको परिवारलाई टेवा दिन छिन्।
जब हामीले २०१ 2014 मा अन्तिम पटक गुवादालुपको कथा साझा गरेका थियौं, उनले एउटा सानो, इट्टा र मोर्टार फूड स्ट्यान्ड खोल्ने सपना देखी। अब, उनी एक खाद्य विक्रेता हुन् हल सान फ्रान्सिस्कोमा र खाडी ट्रक बे क्षेत्र उत्सवहरूमा नियमित रूपमा। गुआडालुपेको परिवार उनको सफलताको लागि महत्वपूर्ण छ। “म यो मेरा छोरीहरूको लागि गर्दैछु। म पक्का गर्न चाहन्छु कि ती दुवैले आफैंका लागि मात्र काम गर्नुपर्दछ ”।
एक मिसन मा एक आमा
हेलेन, ग्वाटेमालाकी एकल आमा, एक साधारण सपनाको साथ MAF आए: आफ्ना बच्चाहरूको लागि एक सुरक्षित घरको लागि। किनभने उनी मोटा सुरक्षा जम्मा गर्न सक्दिनन् र क्रेडिट स्कोर छैनन्, उनीसँग साझा अपार्टमेन्टमा कोठा भाडामा लिनु बाहेक अरू कुनै विकल्प थिएन - जसमा हलवेमा बस्ने परिवारहरू पनि थिए।
लेन्डिending सर्कलमा सम्मिलित भएपछि हेलेनले सुरक्षा निक्षेपको लागि पर्याप्त बचत गर्‍यो र उनको क्रेडिट स्कोर निर्माण गर्‍यो। अब उनीसँग आफ्नै छोरीहरुका लागि तीन बेडरूम कोठा छ र उनीहरुका ठूला सपनाहरु पनि छन्।
उनको छोराको समर्थनको साथ कपकेक्स अप शिपिंग
एल्भियाछोराले बेक गर्नको लागि उनको सोझो प्रश्नलाई बेवास्ता गरे: "आमा, तपाईलाई के गर्न मन पर्छ?" भोजमा सबै भन्दा राम्रो मिठाई राख्ने प्रतिष्ठा बनाए पछि, उनको परिवार र साथीहरूले एल्भियालाई बेकरी सुरू गर्न प्रोत्साहित गरे।
उनले एक $5,000 MAण MAF बाट फ्रिज, व्यापार इजाजतपत्र, र बेकरी बढ्नको लागि आवश्यक धेरै संख्यामा लगानी गर्न प्रयोग गर्‍यो। ला लुना कपकेक्स। उनीसँग सान फ्रान्सिस्कोको क्रोकर ग्यालरियामा कपको केक पसल छ, र उनका बच्चाहरू अझै उत्तर तारा बन्न पुगे। "तपाइँले केहि चाहानुहुन्छ भने म उनीहरूलाई सधैँ सिकाउँथें, तपाइँ यो गर्न सक्नुहुनेछ! तपाईको सपनामा विश्वास गर्नुहोस्! "
लेस्ली मार्लि to, MAF को नयाँ पार्टनर सफलता प्रबन्धक, धन्यबाद यो पोष्टमा उनको योगदान को लागी।